Podcast 2x06: Chipgate, Burngate ary bebe kokoa | Vaovao IPhone
Hiverina mandritra ny herinandro iray miaraka amin'ny podcast-tsika ary amin'ity indray mitoraka ity hiresaka momba ireo olana voalaza amin'ny iPhone 6s sy 6s Plus vaovao. Amin'ny lafiny iray ny Chipgate na ny olana amin'ireo mpikirakira vita amin'ny mpamokatra samihafa. Misy fiatraikany amin'ny mpampiasa ve ny fananana iray na ny puce hafa? Ary avy eo dia misy ny voalaza fa may tamin'ny rantsan-tanan'ireo mpampiasa sasany noho ny hafanana be loatra an'ny iPhone teny an-tanany. Niresaka momba ny kojakoja Mac vaovao ihany koa izahay, ny fanavaozana WhatsApp hafahafa ary ny Jailbreak vaovao ho an'ny iOS 9.
Henoy ny »2 × 06: Chipgate, Burngate ary bebe kokoa» ao amin'ny Spreaker.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » Podcast 2 × 06: Chipgate, Burngate ary maro hafa